200KW Series Kubatanidza IGBT & Mosfet Yakabatanidzwa Solid State HF Welder Welding kabhoni simbi chubhu yakananga musono ERW chubhu chigayo michina.
Iyi 200kw IGBT yakabatana solid state hf welder yaive yazvino kugadzirwa yemhando yepamusoro neDiode zvese wave kugadzirisa kugadzirisa kuwedzera IGBT kutema kutsiva SCR kugadzirisa, kugadzirisa simba remagetsi.Save 15% ~ 25% yemagetsi.
300KW Series Kubatanidza MOSFET IGBT Yakabatanidzwa Solid State HF Welder Iron Tube Kugadzira Mashini Rectangle / Oval otomatiki Simbi Pipe Welding Machine
Zvese mune imwe kabhineti, sanganisa switch inogadzirisa kabhodhi uye inverter kuburitsa kabhineti.
Sevha 15% ~ 25% emagetsi emagetsi pane akapatsanurwa akakwira frequency solid state welding muchina.
Uchishandisa yakakwira-simba MOSFET imwechete-chikamu invert mabhiriji akabatanidzwa muParlellel.
400KW Series yekubatanidza Solid state igbt hf welder welding kabhoni simbi chubhu yakananga musono ERW chubhu chigayo michina